Afrịka bụ ebe mmepeanya na ụbọchị njem nlegharị anya ụwa bidoro
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Afrịka bụ ebe mmepeanya na ụbọchị njem nlegharị anya ụwa bidoro
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Tourism • trending Ugbu a
Network Tourism Network yana Kọmitii Na -ahụ Maka Njem Nleta Africa sonyeere UNWTO taa na -eme ememme ụbọchị ndị njem.
Septemba 27, 2021 bụ ụbọchị ichefu ọdịiche, ihe ịma aka na COVID-19.
Njem nlegharị anya gụnyere mmadụ niile, ọ ga-aga nke ọma karịa ma mara nke ọma mgbe ị na-eme mgbanwe na gburugburu COVID-19.
E hiwere ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa na nnọkọ nke atọ nke UNWTO na Torremolinos, Spain na 17th nke Septemba, 1979 site n'aka onye Naijiria akpọrọ IGNATIUS AMADUWA ATIGBI.
Onye nwụrụ anwụ Ignatius Amaduwa Atigbi, bụ nwaafọ Naịjirịa, bụ onye tụpụtara echiche ịka akara ụbọchị iri abụọ na asaa nke ọnwa Septemba kwa afọ dịka ụbọchị njem nlegharị anya ụwa, ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji akpọ ya “Mr. Ụbọchị Njem Nleta Ụwa ".
Taa ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Afrịka soro Afrịka niile na ụwa niile mee ncheta ụbọchị njem ụwa. Ọ bụ ụbọchị ọchị, na ụbọchị echefuru COVID-19
Ọ bụ Maazị Ignatius Amaduwa Atigbi welitere mmegharị ahụ maka ịmalite njem nlegharị anya nke ụwa na UNWTO n'afọ 1979. Ọ bụ onye isi ụlọọrụ mbụ nke Nigerian Tourism Development Corporation (NTDC), nke a na-akpọzi Nigerian Tourist Association (NTA), Ọ bụkwa Onye isi oche nke Commission Njem Africa (ATC).
Na 1980, na Tourtù Mba Ndị Na -ahụ Maka Nleta Ụwa nke Mba Ndị Dị n'Otu Ememe Ụbọchị Njem Nleta Ụwa dị ka emume mba ụwa na Septemba 27. A họọrọ ụbọchị a ka ọ bụ n'ụbọchị ahụ n'afọ 1970, a nabatara ụkpụrụ UNWTO. A na -ewere ịnabata Iwu ndị a dị ka ihe dị mkpa na njem nlegharị anya ụwa. Ebumnuche nke ụbọchị a bụ iji mata ọrụ njem dị n'ime mba ụwa na igosipụta etu o si emetụta ụkpụrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, omenala, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụnụba ụwa niile.
Ignatius Amaduwa Atigbi na 1979 - Maazị Ụbọchị Njem Nleta Ụwa
Ọ nwụrụ mgbe ọ dị afọ 68 na Disemba 22, 1998, e wee lie ya n'obodo ya, Koko, Delta State.
Taa, a na -eme ememme ncheta njem nlegharị anya nke ụwa niile n'Africa na gburugburu ụwa.
Nye ọtụtụ ndị, nke a bụ ụbọchị ezumike site na nchegbu nke COVID-19 yana mbibi ọrịa a mere ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya gburugburu ụwa.
Cuthbert Ncube, onye isi oche njem nlegharị anya nke Africa kwuru eTurboNews:
“Anọ m na -eme ememme ụbọchị njem nlegharị anya n'okpuru igwe Afrịka n'ugwu Mountain nke Eswatini. Mụ na onye nnọchi anya ATB Brand Mr Sandile nke njem nlegharị anya South Africa,
Eswatini bụ ụlọ ọhụrụ maka Kọmitii Njem Nleta Africa.
Onye isi oche ATB nwere obi ụtọ na -anụ ụtọ Eswatini na Day Tourism World
“Ọtụtụ mba Afrịka emeghela ugbu a maka ndị ọbịa mba ofesi ka ha bịa nyocha ụdị anyị dị iche iche n'ihe gbasara Omenala, nnukwu ohere anyị nwere maka itinye ego ka anyị na -anabata mmetụta na ntinye aka nke njem nlegharị anya na uto na nkwado na imepụta ọrụ.
Ọ dị anyị mkpa ịnwe mkpokọta mkpokọta gafee ụwa n'ịkwado ala nke na -adabaghị na ya na Africa na onyinye ya dị iche iche na -arụ ọrụ dị mkpa n'itinye aka na GDP ụwa.
Ndị obodo anyị kwesịrị irite uru site na ụfọdụ spinoffs ya mere ka anyị na-eme ememme ụbọchị a, Afrịka kwesịrị ilekwasị anya na mmejuputa mmegharị nke ime obodo na nke obodo dị ka ntọala maka ịkwalite akụnụba njem anyị.
O zughị ezu iburu anyị mee ememe ụbọchị a, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime obodo anyị dara ogbenye. Anyị kwesịrị itinye aka n'ụzọ zuru oke iji nwee ekele maka agbụ ọnụ ahịa njem na -abara ndị na -elekọta ihe nketa anyị uru. ”
eTurboNews nwetara nzaghachi sitere n'ọtụtụ mba Africa, gụnyere Angola:
Onye nnọchi anya ATB: Kuyanga Diamantino: WTD, si Angola. Anyị kwenyere na mgbake zuru oke, anyị kwenyere na mbọ ọhaneze na nkeonwe iji wulite ebe njem nlegharị anya Africa siri ike. Anyị kwenyere na mmepe Afrịka site na nkwalite njegharị njem nlegharị anya